Vacuum Interrupter (VI) Vagadziri & Vatengesi - China Vacuum Interrupter (VI) Fekitori
Yakabatanidzwa Pole Yekunze Yemukati Matunhu Anopwanya EP-12 / 630-25 EP-12 / 1250-25 EP-12 / 1250-31.5
Manotsi 1. Inosangana kana kudarika zvinodiwa nemagetsi kutsungirira zvekirasi E2 yebasa rekuvhara mota paIEC62271-100 uye GB1984-2003 2. Rated maitiro tobe givenon chikumbiro. 3.Yakatemerwa kuputira tsika inoda kuti extemal insulati pa, yakadai seSf6, oiri kana yakasimba dielectric zvinhu nezvimwewo Main technical Specifiation Rated Voltage KV 12 Rated Razvino A 630/1250 Rated Frequency Hz 50 Pfupi-nguva simba-frequency Rambai Voltage (1min) KV 48 Rated mheni Kufuridzira Withstan ...
Vacuum chipingamupinyi chemutoro break switch TF-12 / 630-20 (2F56)
Manotsi 1. Inosangana kana kudarika zvinodiwa nemagetsi kutsungirira kwekirasi E2 yebasa rekuvhara mota paIEC62271-100 uye GB1984-2003. Rated Hunhu hunofanira kupihwa pachikumbiro. 3.Yakatemerwa kuputira kukosha inowedzera extemal insulati pa, senge Sf6, mafuta kana yakasimba dielectric zvinhu nezvimwewo Main technical Specifiation Rated Voltage KV 12 Rated Razvino A 630 Rated Frequency Hz 50 Pfupi-nguva Power-frequency Rambai Voltage (1min) KV 42 Rated mheni. Impulse Kutsungirira Vo ...
Vacuum Kupindirana KweMutoro Kuputsa Chinja TF-12 / 630-20 (2F55)
Vacuum Kupindirana Kwekunze Circuit Breaker TD-40.5 / 1250-31.5 (4D86)
Manotsi 1. Inosangana kana kudarika zvinodiwa nemagetsi kutsungirira kwekirasi E2 yebasa rekuvhara mota paIEC62271-100 uye GB1984-2003. Rated Hunhu hunofanira kupihwa pachikumbiro. 3.Yakatemerwa kuputira kukosha inowedzera extemal insulati pa, senge Sf6, mafuta kana solid dielectric zvinhu nezvimwewo Main technical Specifiation Rated Voltage KV 40.5 Rated Razvino A 1250 Rated Frequency Hz 50 Pfupi-nguva simba-frequency Rambai Voltage (1min) KV 95 Rated mheni. Kufuridzira Kutsungirira ...
Vacuum Kupindirana Kwekunze Circuit Breaker TD-40.5 / 1250-31.5 TD-40.5 / 1600-31.5
Manotsi 1. Inosangana kana kudarika zvinodiwa nemagetsi kutsungirira kwekirasi E2 yebasa rekuvhara mota paIEC62271-100 uye GB1984-2003. Rated Hunhu hunofanira kupihwa pachikumbiro. 3.Yakatemerwa kuputira kukosha inoda kuti insemati insulati pa, senge Sf6, oiri kana yakasimba dielectric zvinhu nezvimwewo Main technical Specifiation Rated Voltage KV 40.5 Rated Razvino A 1250/1600 Rated Frequency Hz 50 Pfupi-nguva simba-frequency Rambai Voltage (1min) KV 95 Rated mheni Kufuridzira Withst ...
Vacuum Kupindirana Kwekunze Circuit Breaker TD-24 / 630-20 (3D82)
Manotsi 1. Inosangana kana kudarika zvinodiwa nemagetsi kutsungirira kwekirasi E2 yebasa rekuvhara mota paIEC62271-100 uye GB1984-2003. Rated Hunhu hunofanira kupihwa pachikumbiro. 3.Yakatemerwa kuputira kukosha inokonzeresa extemal insulati pa, seSf6, oiri kana yakasimba dielectric zvinhu nezvimwewo Main technical Specifiation Rated Voltage KV 24 Rated Razvino A 630 Rated Frequency Hz 50 Pfupi-nguva simba-frequency Rambai Voltage (1min) KV 65/79 Rated mheni Kufuridzira Withstan ...
Vacuum Kupindirana Kwekunze Circuit Breaker TD-12 / 1250-25 (2D89B)
Manotsi 1. Inosangana kana kudarika zvinodiwa nemagetsi kutsungirira kwekirasi E2 yebasa rekuvhara mota paIEC62271-100 uye GB1984-2003. Rated Hunhu hunofanira kupihwa pachikumbiro. 3.Yakatemerwa kuputira kukosha inokonzeresa extemal insulati pa, senge Sf6, oiri kana yakasimba dielectric zvinhu nezvimwewo Main technical Specifiation Rated Voltage KV 12 Rated Razvino A 1250 Rated Frequency Hz 50 Pfupi-nguva simba-frequency Rambai Voltage (1min) KV 48 Rated mheni. Kufuridzira Kutsungirira ...
Vacuum Kupindirana Kwekunze Circuit Breaker TD-12 / 630-25 (2D89)
Manotsi 1. Inosangana kana kudarika zvinodiwa nemagetsi kutsungirira kwekirasi E2 yebasa rekuvhara mota paIEC62271-100 uye GB1984-2003. Rated Hunhu hunofanira kupihwa pachikumbiro. 3 .Yakatemerwa kuputira kukosha inoda kuti insemati yekuwedzera ivepo, senge Sf6, oiri kana yakasimba dielectric zvinhu nezvimwewo Main technical Specifiation Rated Voltage KV 12 Rated Razvino A 630 Rated Frequency Hz 50 Pfupi-nguva simba-frequency Rambai Voltage (1min) KV 48 Rated mheni. Impulse Kutsungirira V ...
Vacuum Kupindirana Kwekunze Circuit Breaker TD-12 / 630-25 (2D88)
Manotsi 1. Inosangana kana kudarika zvinodiwa nemagetsi kutsungirira kwekirasi E2 yebasa rekuvhara mota paIEC62271-100 uye GB1984-2003. Rated Hunhu hunofanira kupihwa pachikumbiro. 3.Rated kuputira tsikakukosha extemal insulati pamusoro, senge Sf6, mafuta kana solid dielectric zvinhu nezvimwewo Main technical Specifiation Rated Voltage KV 12 Rated Razvino A 630 Rated Frequency Hz 50 Pfupi-nguva simba-frequency Rambai Voltage (1min) KV 48 Rated mheni. Impulse Kutsungirira Vo ...
Vacuum Kupindirana Kwekunze Circuit Breaker TD-12 / 1250-25 (2D85E)
Manotsi 1. Inosangana kana kudarika zvinodiwa nemagetsi kutsungirira kwekirasi E2 yebasa rekuvhara mota paIEC62271-100 uye GB1984-2003. Rated Hunhu hunofanira kupihwa pachikumbiro. 3.Yakatemerwa kuputira kukosha inoda kuti extemal insulati pa, yakadai seSf6, oiri kana yakasimba dielectric zvinhu nezvimwewo Main technical Specifiation Rated Voltage KV 12 Rated Razvino A 1250 Rated Frequency Hz 50 Pfupi-nguva simba-frequency Rambai Voltage (1min) KV 42/48 Yakaridzwa mheni Kufuridzirwa Kutsungirira ...
Manotsi 1. Inosangana kana kudarika zvinodiwa nemagetsi kutsungirira kwekirasi E2 yebasa rekuvhara mota paIEC62271-100 uye GB1984-2003. Rated Hunhu hunofanira kupihwa pachikumbiro. 3.Rated kuputira tsikakukosha extemal insulati pamusoro, senge Sf6, mafuta kana solid dielectric zvinhu nezvimwewo Main technical Specifiation Rated Voltage KV 12 Rated Razvino A 1250 Rated Frequency Hz 50 Pfupi-nguva simba-frequency Rambai Voltage (1min) KV 48 Rated mheni. Impulse Kutsungirira V ...
Vacuum Kupindirana Kwekunze Circuit Breaker TD-12 / 630-25 (2D85)
Manotsi 1. Inosangana kana kudarika zvinodiwa nemagetsi kutsungirira kwekirasi E2 yebasa rekuvhara mota paIEC62271-100 uye GB1984-2003. Rated Hunhu hunofanira kupihwa pachikumbiro. 3.Yakatemerwa kuputira tsika inoda kuti extemal insulati pa, yakadai seSf6, oiri kana yakasimba dielectric zvinhu nezvimwe Main Main Specifiation Rated Voltage KV 12 Rated Razvino A 630 Rated Frequency Hz 50 Pfupi-nguva simba-frequency Rambai Voltage (1min) KV 42/48 Yakaridzwa mheni Kufuridzirwa Kutsungirira ...